eHimalayatimes | सम्पादकीय | बढ्दो सुरक्षा चुनौती
18th August | 2018 | Saturday | 11:36:13 PM
POSTED ON : Wednesday, 11 October, 2017 (5:14:39 PM)
राजधानीको व्यस्त ठाउँमा दिउँसै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष शरदकुमार गौचनको हत्या भयो । समय, स्थान, हत्याका लागि अपनाएको तरिका र हतियार प्रयोगले राजधानीको सुरक्षा व्यवस्थामा प्रश्न उठेको छ । आवत जावतको व्यस्त ठाउँमा बाटो ढुकेर, ढुंगा र गोली हानेर आक्रमणकारीहरू भाग्न सफल हुनुले उनीहरू निकै योजनाबद्ध थिए र यो हतारमा बनेको योजना होइन भन्ने देखाउँछ । मुलुकको ठूलो व्यावसायिक संगठनका प्रमुखको जुन प्रकारले हत्या भयो यसले राजधानी शहर गुण्डागर्दी र हत्याराका लागि सुरक्षित नै छ र व्यक्ति प्रत्येक पल असुरक्षित छ भन्ने पनि देखाएको छ । यो निकै ठूलो चुनौतीको अवस्था हो ।
गौचनहत्या कमजोर सुरक्षा प्रणालीको दृष्टान्त त हो नै, यससँगै मुलुकमा दुई ठूला निर्वाचनको तयारी भइरहेको समयमा भएको यो घटनाले निर्वाचन सुरक्षामा पनि शंका गर्ने ठाउँ दिएको छ । राजधानीमा भएका यस्तै प्रकृतिका केही घटनाहरू अझै रहस्यमै भए पनि धेरै घटनाको अनुसन्धान र अपराधी पक्राउमा हाम्रो प्रहरी संगठनले आफूलाई अब्बल सावित गरेको छ । यस हिसाबले गौचनहत्याको कारण र संलग्न समूह÷व्यक्तिका सम्बन्धमा पनि प्रहरीले गहिराइमा पुगेर अनुसन्धान गर्नेछ र अपराधीलाई पक्राउ गर्नेछ भन्नेमा शंका गर्नुपर्ने ठाउँ छैन ।
गौचन ठूला निर्माण व्यवसायी थिए र उनी व्यवसायीहरूको छाता संगठनका अध्यक्ष थिए । उनको हत्या किन भएको हो र संलग्नताको दायरा कति फराकिलो छ भन्ने कुराले भने घटनाको अनुसन्धानमा प्रभाव पार्न सक्छ । शंकाको एउटा ठाउँ यो हो । प्रहरी कुनै पनि दबाबको प्रभावमा नपरी अनुसन्धान गरेर तथ्यमा पुग्न सकोस् । यससँगै, यति गम्भीर घटनाको विषयमा प्रहरीलाई कुनै पूर्वसंकेत थियो कि थिएन ? थियो भने किन प्रहरीले सुरक्षा दिन सकेन ? थिएन भने प्रहरी तथा गुप्तचरका सूचना संयन्त्रहरू कसरी के काम गर्छन् ? प्रहरी अनुसन्धानले यस्ता प्रश्नहरूको पनि जवाफ खोज्नुपर्छ ।
सुरक्षा संयन्त्रहरूले घटनामा आफ्नो बचाउको प्रयास गर्न सक्छन् । यसो गर्न खोजे पनि गौचनको हत्याले राजधानीको सुरक्षा व्यवस्था कमजोर छ भन्ने देखाएको छ । राजधानी नै यति असुरक्षित छ भने दुर्गम क्षेत्रहरूमा ठूला निर्माणको काम गर्ने व्यवसायीहरूले असुरक्षा अनुभव गर्नु अस्वाभाविक हुँदैन । राज्यले प्रत्येक व्यक्तिलाई सुरक्षा प्रत्याभूत गर्न सक्नुपर्छ । नजिकै आइरहेको निर्वाचनका कारणले सुरक्षा प्रत्याभूतिको झन् बढी महŒव छ । यस्ता हत्याका घटनामा साना हतियारको प्रयोग हुने गरेको छ । यस्ता हतियार नियन्त्रणका लागि राज्यले कडाइ गर्नु आवश्यक छ । होइन भने घटनाहरू दोहोरिइरहने छन् । सुरक्षा चुनौती थपिँदै जानेछ ।
: Friday, 17 August, 2018 (3:16:59 PM)
दीर्घकालीन सोच चाहियो
: Thursday, 16 August, 2018 (3:24:03 PM)
सेवा बन्द गर्ने हठ
: Wednesday, 15 August, 2018 (4:34:36 PM)